श्रीमतीलाई प्लास्टिकमा बेरेर बनाइयो विश्व कीर्तिमान।। – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ समय: २१:१०:५७
संसारमा केही यस्ता विश्व रेकर्ड बन्दछन्जु, न निकै अविश्वसनीय तथा रोचक पनि हुन्छन् । एकजना व्यक्तिले आफ्नी पत्नीलाई प्लास्टिकमा बेरेरसमेत विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
अमेरिकाको इडाहोमा बस्ने डेभिड रश नामका ती व्यत्तिले १ मिनेट २.४४ सेकेण्डमै आफ्नी पत्नीलाई पोलिथिनभित्र लपेटेर गिनज बुकमा नाम लेखाएका हुन् ।
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई बढावा दिनका लागि आफूले यस्तो कदम चालेको रश बताउँछन् । रशले यस प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै विभिन्न डेढ सय विश्व कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन् ।
यसअघि उनले सन् २०१९ मा पनि उनले आफ्नी पत्नीलाई १ मिनेट ५७ सेकेण्डमा प्लास्टिक र्‍यापले बेरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए । यसपटक उनले उक्त समयभन्दा पनि कम अर्थात् १ मिनेट २.४४ सेकेण्डमै पत्नीलाई प्लास्टिकमा र्याप गरेर आफ्नै अघिल्लो कीर्तिमान भङ्ग गरेका हुन् ।उनका अनुसार पत्नीलाई प्लास्टिकमा बेर्ने अभ्यास गर्नका लागि ९ रोल प्लास्टिकको र्‍यापिङ पेपर सकिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस।।
७. पहिला जस्तो छैनः हरेक युवतीले विवाहपछि गुनासो गर्छन् । विशेषगरि पतिसमक्ष उनीहरुको गुनासो हुन्छ । तपाई पहिलाको जस्तो हुनुहुन्न । फेरिनुभयो जस्तो शव्द उनीहरुको नियमित बन्न जान्छ । विवाह पछि पनि व्यक्ति वा पुरुष पहिलाको जस्तै कसरी रहन सक्छ र ? भन्ने चाहिँ उनीहरुले सोच्दैनन् । त्यस्तै पुरुषले पनि युवतीमाथि सोच्ने गर्छ । महिला र पुरुष दुवै स्वतन्त्र भएको बेलाको जस्तो हुँदैनन् । पारिवारिक झमेला, सम्बन्ध र जिम्मेवारीले गर्दा सबै परिवर्तन हुन्छन् भन्ने दुबै पति र पत्नीले बुझ्ने हो भने समस्या नै पर्दैन ।